AMASHUMI AMAHLANU E-GREY VS BOUND: MOCKBUSTER BEATS ORIGINAL - UMNIKELI
F Gary Ngwevu
Ingxaki Enkulu E-China Encinci
Amashumi amahlanu e-Grey vs Grey Bound: Xa i-Mockbuster ibetha i-Original yayo
Ngamaxesha athile, xa uthetha nge Amashumi amahlanuIimpawuEngwevu okanye umzali wayo Ngorhatya Ndiziva ngathi uAl Pacino ungene U-Godfather III : Kanye xa ndicinga ukuba ndiphumile, banditsalela emva. Nangona ukubaluleka kwabo sele kuphelile, bahlala bezinto ezinomdla zokuvavanya, ukuxoxa, ewe, ukugculelwa. Zombini zibethe inkcubeko ye-pop njenge-sledgehammer, kwaye ukulandela kwesoyikiso kusabonakala. Oku ngaphandle kwento yokuba zithathwa ngokubanzi njengezothusayo, ezesini, kunye nesini esibi.
Kodwa asikho apha ukuxoxa ngeziphumo zenkcubeko ye pop Ngorhatya , kwaye asikho apha ukuba sixoxe ngeziphumo ze Amashumi amahlanuIimpawu . Hayi, silapha ukuxoxa ngefilimu endiyifumeneyo ebeka umxholo ophantsi kakhulu (kwaye, ngamanye amaxesha, isicatshulwa) Amashumi amahlanuIimpawu ngokomxholo-ifilimu encinci eyothusayo ebizwa Ukubanjwa .
Hayi, hayi ifilimu yeWatchowski eyamkelwe kakuhle evela kwi1996. Hayi, le bhanyabhanya ivela ku-2015, kwaye iyamangalisa. Ukubanjwa , kumbindi wayo, yinto ehlekisayo ye Amashumi amahlanuIimpawuEngwevu . Kulabo abangaziyo (ngethamsanqa kuwe), i-mockbuster yifilimu eyilelwe ukufana ngenjongo nebhloko enkulu yohlahlo-lwabiwo mali, kodwa ibe yexabiso eliphantsi kwaye ikhutshwe kuqala, ngenjongo yokubhidanisa abantu ekuthengeni okanye ekuqeshweni kwe-mockbuster. Isitudiyo esivelisileyo Ukubanjwa I-Asylum, ifumene ukuqondwa okuqhelekileyo kwayo Sharknado Iimuvi kwaye idume kakubi ngabahlekisi bayo.
Ke, Ukubanjwa yenzelwe ukuba ikhutshwe malunga nexesha elifanayo ne Amashumi amahlanuIimpawu bhanyabhanya kwaye, enyanisweni, wakhululwa kanye kwinyanga engaphambili (nge-9 kaJanuwarith, ukuya Amashumi amahlanuIimpawu ‘EyoMdumba 9th). Nangona kunjalo, ngelixa uninzi lweziphumo ze-Asylum zibi kakhulu kwaye zikhohlisa abathengi beRedbox abangakhathali, Ukubanjwa i… yahluke kancinane. Ndiyathetha, iseyingozi schlock, kodwa kukho into enomdla ebhabhela phantsi komphezulu.
Okokuqala, ikhosi yokuhlaziya ekhawulezayo Amashumi amahlanuIimpawu , Ukuqinisekisa nje ukuba sonke sisebenza kwasekuqaleni. Sukuba nexhala, ayizukuthatha thuba lide. Andisosidenge ngokwaneleyo ukuba ndenze okuphindiweyo kokubini kubume kwinqaku elinye; Ndifuna nje sonke kwiphepha elinye. Amashumi amahlanuIimpawu Uxhalabise umfazi ogama linguAna Steele oya kwikholeji eWashington (ilizwe, hayi isixeko) kwaye abaleke kwigama lendoda enguChristian Grey, yiyo loo nto isihloko. Emva kokumazi, ufumanisa ukuba ngokwenene ungena kwi-BDSM, kwaye akazukuphinda athandane naye ade avume ukuba yintobeko yakhe.
Ke yintoni engalunganga ngaloo nto, ungabuza ngokufanelekileyo? Ewe ingxaki yindlela ahamba ngayo ngayo. Njengoko kubonisiwe kwincwadi nakwimovie, unyango lukaChristian Grey luka-Ana aluthandanga kangako kwaye luthe ngqo lukuhlukumeza. Uyamgxeka, amthintele ukufikelela kubahlobo nakusapho, uyalela ukuba alale phi kwaye nini, utya ntoni, unxiba njani kwaye uthwele iinwele zakhe… konke kuphazamisekile. Incwadi ithatha amanyathelo ngamanyathelo utata-kubandakanya naye ngqo ukudlwengula uAna ngaxa lithile-kwaye uthanda Ngorhatya ( Amashumi amahlanuIimpawu yaqala njenge Ngorhatya fanfiction, yiyo yonke le nto uthelekiso), yonke le nto imbi, indlela yokuziphatha gadalala iboniswa ngathi yeyothando.
Phambi kokuba siqhubeke, ndifuna ukuxoxa ngokufutshane ngesihloko esiza kakhulu kugxekwa kwimithombo yeendaba: injongo. Ukuba isiqwenga semithombo yeendaba sigxekwa ngento enengxaki, amaxesha ngamaxesha impendulo yokuqala-evela kubalandeli, ubuncinci-kukukhusela injongo yombhali. Ndivakalelwa kukuba, iyasilela kwinqanaba. Injongo yokugunyazisa inomdla, kodwa ayisincedi ngawona msebenzi, kwaye kunokwenzeka ukuba umntu enze isiqwenga semidiya esi… kakuhle, yingxaki ngokunganikeli ngqalelo kwiziphumo zebali abalibalisayo. Yeyiphi indlela ende ekuthiwa andicingi Amashumi amahlanuIimpawuEngwevu umbhali uE. Ngokwenyani uJames ucinga ezi zinto, kodwa into ayicingayo ayibalulekanga- lithini ibali ngu .
Ukusukela Amashumi amahlanuIimpawuEngwevu uthotho luthengise ngaphezulu kwe-125 yezigidi zeekopi, kwaye imovie yokuqala yenza ngaphezulu kwe-500 yezigidi zeedola kwi-ofisi yebhokisi (amaxesha ama-5 yintoni Indoda yentaka yenziwe ... ubuntu, ndiyaphoxeka) ngelixa ndandinogonyamelo ngokwesini, yaphefumlela uhlalutyo oluninzi. Abantu babhale malunga njani isini , malunga nendlela ayikhethi ngesini, malunga nendlela ayimelanga iBDSM , malunga nendlela umKristu amphatha ngayo uAna ngathi yinkokeli yehlelo … Iphefumlelwe iziqwenga zokucinga yile nto ndiyithethayo.
Oku… ayisiyonto yokucinga malunga Amashumi amahlanuIimpawu . Esi sisiqwenga sokucinga malunga Ukubanjwa , ke ekugqibeleni masifike kuloo nto.
Ukubanjwa , ubuncinci kwasekuqaleni, kubonakala ngathi kuyalandelwa iyelenqe Amashumi amahlanuIimpawu Ngaba unayo ukuba isekwe kwiifilimu zothando oluqhelekileyo kunokuba Ngorhatya fanfiction. Ifilimu ivula noMichelle Mulan-edlalwa nguCharisma Carpenter, ukuba ubunokuzibuza ukuba umsebenzi wakhe uqhubeka njani ukusukela UBuffy— ngubani (cula kunye ukuba uyawazi amagama) umfazi oshishino ogqithileyo ongenalo ixesha lobudlelwane bokwenyani. Ngokukodwa, ungumthengisi wearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, endazi kuphela ngokuba imovie ichitha iITON yexesha kuyo. Ngokukrakra, ukuba Mfutshane khange aphume, Ukubanjwa isenokuba yeyona bhanyabhanya ilungiswe ngokuthengiswa kwezindlu ngo-2015.
Kodwa ndiyaphuma. Phakathi kokungazaliseki kweentsuku, uMichelle uzama ukugcina ishishini likayise kwaye akayithathwa ngokungathí sina, kuba akaqinisekanga ngokukodwa, kwaye uyise akamthathi ngokungathí sina, nokuba. Kananjalo, inokuba kungenxa yokuba utata wakhe edlalwa nguDaniel Baldwin, oneminyaka eyi-10 kuphela kuye, kodwa ndazi ntoni? Uyasilela ukugcina ubudlelwane bakhe nentombi yakhe, endiqhele ukutsiba, kodwa uya kubaluleka kamva.
Umfazi umangalela ikofu eshushu kaMcdonald
Ngelixa esiya kwisidlo sangokuhlwa, ubalekela kwindoda egama linguRyan Black (uBryce Draper, kwaye elo gama alihlekisi njengoko becinga), oneminyaka eli-15 emncinci kuye, umbetha, kwaye ekugqibeleni uyamlukuhla. Kuyavela ukuba uyinto ethile yekinky yokwenyani, ukuya kuthi ga kunye nokubandakanya i-BDSM, elungileyo, kodwa uqala ukufumana ulawulo ngakumbi, efuna ukuba aqhubeke nokumkhonza ngokwesondo kwimisebenzi yempangelo kwaye ale xa ecela ukuba batshintshe.
amazwi eengoma avela kwiintsingiselo zeroses
Konke oku kubonakala kufana Amashumi amahlanuIimpawu 'Ibali lendaba, kodwa nantsi apho inika umdla. Okwangoku, uqala ukutyhala ngasemva ngokungxama, ebuza ukuba angaze abe yidom okanye ukuba unomdla kubudlelwane bokwenyani, kwaye uyacaphuka aze aphume. Uye emva koko aphume aye kwiklabhu ye-BDSM emthabathele kuye kwaba kanye (ewe, umsa kwiklabhu ye-BDSM ngaxeshanye) kwaye enye yee-Doms iyaqhubeka kwintetho ende malunga nendlela uRyan angameli ngayo iDomming efanelekileyo kwaye indlela enza ngayo isaphuli-mthetho esiyingozi.
Ngoku sele inomdla, usebenzisa amathambo angenanto Amashumi amahlanuIimpawu 'Ibali ukucacisa ngokucacileyo ezinye zezinto ezigxekayo kulo, oko kukuthi ayibonisi inkcubeko yeBDSM kakuhle. Andinakuthetha nyani kuloo nto, njengoko intle kakhulu ngaphandle kwendawo yam yobungcali, kodwa ayisiyiyo le nto ndilapha ukuba ndithethe ngayo. Hayi, into endiyithethileyo apha yinto eyenzekayo ngokulandelayo.
Ke uRyan, ukuba luhlobo oluvuthiweyo noluzinzileyo, uthatha isigqibo sokuya ngasemva kukaMichelle ayokulukuhla intombi yakhe, eneminyaka eyi-16 kwaye intombi yakhe , ke loo nto gross ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Ke, uyeka ukumbona, kwaye ... akayithathi kakuhle loo nto. Ngokukodwa, uyamrhashaza, amhlukumeze, kwaye ngokukhawuleza anyuke aye ngqo ekumhlaseleni. Ke uyamlwela, ambophele, kwaye ... amenze into ngokuchasene nentando yakhe, ejongeka ngokungafaniyo nokuhlukunyezwa. Emva koko ubamba ukuba abanjwe ngesondo kunye nentombi yakhe, engaphantsi kweminyaka.
Emva koko, ubuyela kwishishini likayise kwaye ngequbuliso uthathwa ngokungathí sina. Uzimisele ngakumbi, kwaye uyakwazi ukubonisana ngendlela yakhe yokudibana kunokuba kuthathwe ishishini likayise, ngelo xesha baphinde bachithe njengesiqingatha seyure bebetha malunga nomhlaba nezindlu. Ulahlekisa iqabane lakhe kwishishini kunye nolunye uqeqesho * lwezinto ezintsha.
Kulungile, ke kuninzi ekufuneka uchazile malunga nendlela isenzo sesithathu esivelayo-ayisiyiyo yonke elungileyo-kodwa kukho iimbono ezimbalwa ezinomdla ezingcwatyelwe phaya. Eyokuqala ingumxholo wokubuyisa isini. Ngoku, ingxoxo malunga nesini sobufazi kunye nokubuyisa isini sele sinameva, kwaye enye andinaxesha lokungena kuyo kwaphela, kodwa ayinakuphikwa ukuba ifilimu iyayithanda. Ngokuqinisekileyo uMichelle wonwabile kwaye ukhululekile kumdlalo wesithathu wefilimu, xa athe wamkela iminqweno yakhe kwaye azifumanele kulawulo lwesini sakhe.
Ngaphezu koko, iyajika Ukubanjwa kwisigwebo esicacileyo se Amashumi amahlanuIimpawu ‘Ibali. Andizifundanga ngokweenkcukacha (kuba Amashumi amahlanuIimpawu uthotho luphelele ngaphezulu kwe-1600 yamaphepha, ethi abo babalayo ekhaya, iphindwe kabini Umnyama weGravity 'S iphepha ukubala), kodwa kuzo zonke endizifundileyo, kwi Amashumi amahlanuIimpawu , umxholo ongaphantsi, kunye nesiqhelo, umxholo kukuba uAna makangenise ukuthanda kukaGrey, kwaye uya kuba ngumntu owonwabileyo xa esenza nje nantoni na ayithethayo, ngaphandle kwento yokuba, nangayiphi na indlela yokulinganisa, ukulawula, ukukhohlisa , kunye nobukho ngokubanzi benetyhefu ebomini bakhe.
Ukubanjwa , kwelinye icala, iyayivuma ngokucacileyo into yokuba uRyan unobukho obunobungozi ebomini bukaMichelle kwaye ubonakalisa ukuba unokonwaba kuphela akuba emhlambulule ebomini bakhe. Ngaphezu koko, ngelixa unyango lwakhe kuye lusoyikeka kancinci ukuba ndiliginye njengegorha, aluzange luzive ngathi kufuneka linike uRyan isizathu sokuziphatha kwakhe, okanye enze uMichelle axolise ngokumfuna aphume ebomini bakhe. Oko kukuthi, kwisiseko sayo, umyalezo olungileyo. Abantu abanetyhefu banetyhefu, nokuba zithini na izizathu zabo, kwaye awutyali mntu uxolo okanye ingcaciso yokuba ufuna bahambe.
Eyona nto ikhathazayo yile yokuba andinakuqiniseka ukuba ingakanani lento enenjongo. Iimuvi ze-Asylum ziyilelwe ukuba zenziwe ngokukhawuleza nangokungabizi kangangoko kunokwenzeka kwaye zijolise ekuhambeni kufutshane nomgca wokuphulwa kwelungelo lokushicilela kangangoko kunokwenzeka (kwaye kuphela ngamaxesha athile ukuwa phezu kwayo ). Andinakuqiniseka nokuba bazimisele ukwenza imovie egwebayo Amashumi amahlanuIimpawu ngenxa yokubhala kwakhona okanye ukuba bebhala nje ngokukhawuleza, kwaye yindlela i-movie eyayihamba ngayo.
Eyona nto inokuphelisa eyona nto ibalulekileyo yokuthatha, kuzo zombini Amashumi amahlanuIimpawu kwaye Ukubanjwa . Andazi ukuba ababhali bayo nganye bajonge ntoni, kodwa ekugqibeleni, ayinamsebenzi. U-E. Kusenokwenzeka ukuba uJames ebengenazinjongo zokuba iincwadi zakhe zivele njengabantu ababelana ngesondo ngendlela engummangaliso, kodwa yindlela ezanyikima ngayo ephepheni. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukuba ucinge ngeempembelelo ezikwibali lakho ngelixa ulibhala.
Nokuba kunjalo, Ukubanjwa iyafumaneka kwiNetflix ngeli xesha lokubhalwa, kwaye andinakukucebisa ukuba uyibone. Inomdla ngokomqondo, kodwa ayisiyiyo yonke loo nto inomdla wokubukela. Inemizuzu embalwa apho iwela khona ukuba ibe mbi ngokuhlekisayo, kwaye yeyona nto kuphela apho i-Mockbuster ingcono kunefilimu esekwe kuyo (khumbula, ayithethi lukhulu kule meko), kodwa ayisiyiyo kwaphela ixesha lakho kunye nomzamo, ngaphandle kokuba ugqityiwe okanye unengxaki enkulu kwiCharisma Carpenter.
UJames yiCinephile esekwe eConnecticut, cinephile yokuzalwa e-Alaskan Igumbi nothixo onzima. Umdla wakhe ubandakanya IWarhammer 40k , iifilimu ze UNicolas cage (kokulungileyo nokubi), kunye namaxesha angacacanga kwimbali. Ubhala uphononongo lweemovie Inyama yePowah phantsi kwegama Elessar Ikwanayo nebhlog, apho kujongwa khona zonke iziqendu ze Iifayile ze-X e Ndifuna ukuphonononga . I-twitter yakhe inokufumaneka Elessar42 , Kwaye i-tumblr yakhe inokufunyanwa kwi Ibhola ekhatywayoTuxedos .
Ayisiyiyo kuphela ukuba Ubuhle obuBini kunye neMiboniso yeTV yeRhamncwa eMisebenzini, ngoku kukho iMovie
Omhle Kunye Nesilwanyana
UFrito-Lay ubhengeza iiLosos Tacos Doritos, yenza ukuKhanya kwiXesha leXesha eliPhambili
Ibali leKorra Newbie Recap: Ixesha lesithathu lokugqibela
Ngaba ulubukele ngenene uncedo ngoku? Ngokukrakra?
Iimuvi eziPhezulu eziPhakanyisayo ze2018 Yithi uLote ngeXesha lethu
Ikhephu Lamanzi Abilayo
Sana Kubanda Kwayo Ngaphandle
U-belle no-tina ngabahambi bexesha
jem kunye neeholograms oonodoli 2015
ilivo lexesha lekorra lokuqala
Indoda enxibe ilokhwe
Ngaba ngokwenene yayikhona inkosi arthur